Turkey Kasị Fun Science Festival nwere ndị 150 puku ndị mmadụ - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region42 KonyaTurkey Kasị Fun Science Festival 150 Puku Nleta
Turkey Kasị Fun Science Festival 150 Puku Nleta
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey 0
kasị ụtọ sayensị ememme ahụ bịara leta ya ọtụtụ puku turkiyenin
A haziri 7 na Center Science Science na isiokwu nke “Olee otu esi, kedu ka ọ si arụ ọrụ yıl. Otu narị mmadụ na iri puku ise bịara leta Konya Science Festival.
Konya Metropolitan Municipality nyere site TUBITAK akwado Turkey mbụ sayensị center, ẹkenịmde ke Konya, Turkey Science Center kasị ụtọ, Anatolia nnukwu sayensị ememme 7. Egwuregwu Konya Science nabatara ndị na-anụ sayensị sayensị afọ niile si Konya na obodo dị iche iche.
Ememe ụbọchị 3, ụbọchị ikpeazụ nke onye isi obodo nke Konya Metropolitan Obodo Ugur Ibrahim Altay, ụmụaka na ndị na-eto eto zukọtara.
Owuwu n'ọdịnihu Turkey bụghị otú ụmụ anyị na anyị emekatakwala emekata OCH ICH
Onye isi ala Altay kwuru na ha bịara Ememme Science iji soro ụmụ ha na-ere ahịa obi ụtọ na gburugburu ebe obibi ma gbakwunye ọtụtụ ihe mmemme na afọ a. Obodo 'Attack' helikọpta nke ogba unmanned keikuku Vehicle (SIH) onyeisi oche kwuru na ememme gosipụtawo Altai, "N'eziokwu, ihe niile anyị na ụmụ anyị n'ọdịnihu, anyị na-atụ na-enye obi ike na-ewu n'ụzọ Turkey. N'ebe ụlọ ntu 100 anyị, onye ọrụ 500 na-arụ ọrụ maka ụmụaka. Ememe Science bụ nnukwu ohere ọ bụghị naanị maka Konya, kamakwa maka Aksaray, Karaman, Nigde, Ankara na Eskisehir. Enwere olile anya n’afọ ọzọ anyị ga-agbakwu ma zọlite. Akụkụ kachasị mkpa nke Ememme Science anyị bụ ịhazi ihe omume ebe ụmụaka nọ na ebe ọ bụla. Enwere m olileanya na ndị anyị nọ n'afọ ndụ niile ga-enwe obi ụtọ ịhụ gị ebe a. ”
AK RKỌ UKWU EGO NA-EGO N’afọ ọ bụla
Onye isi ala Altay rụpụtara aka na ntinye aka na Konya Science Festival mụbara kwa afọ wee sị, “N'afọ gara aga, 100 agafeela puku. N'afọ a, anyị erutela puku kwuru puku nke 150. TEKNOFEST, nke e mere na Istanbul nyekwara aka nke ukwuu. O mepụtara nnukwu mmasị na ememme ndị dị na obodo anyị. Enwere m olile anya na a ga-emezu ya na ntinye aka dị elu site na afọ na-abịa. Ọ ga-amasị m ikele ndị Konyan niile na ndị sonyere. ”
'ATAK' NA 'SİHA' DARA NIILE KAR SCB SCR SC NKW SCKWỌ SITE NA NSỌ
7. Ememme Konya Science bụ oge mmebi ọkụ n'afọ a. E gosipụtara helikopta anyị na-emepụta mpaghara 'Atak' na ụgbọ agha agha na-enweghị atụ (SmanHA) na nke mbụ n'afọ a na Ememme Science. Helikopta ọgụ na SİHA so n'ọtụtụ ebe ndị ọbịa na-anụ ọkụ na-eleta Ememme Science.
SITE N'IME AKWIKWỌ NSO
Na Konya Science Festival, nke a na-eme na mpaghara ghe oghe nke dị ihe dịka mpụga 1000; N'ime 6, ọtụtụ ọrụ dịka ihe omume sayensi, ihe ngosi sayensị, asọmpi, simulators, ụgbọ elu, ebe ọrụ UAV na 100B ebe ndị na-ebi akwụkwọ, ebe a na-emepụta oghere ụgbọ elu, nyocha ndị dị na mbara igwe, ọmụmụ ihe nzuzo, ebe a na-eji kọmputa ede ihe. Ndị sonyere ahụ nwere ahụmịhe nke na-esonye ike na usoro nyocha sayensị.
Konya Science Center Na-akwado 1 Million 225 Thousand Science Curiosities 06 / 01 / 2019 Konya Konya Metropolitan Municipality, Turkey si TUBITAK-aided uru mbụ Science Center, nwekwara 2018 bụ na-elekwasị anya nke sayensị enthusiasts. 2018 kwadoro 310 puku ndị ọbịa na ọtụtụ ihe omume, ebe ọ bụ na 1 akwadola 225 puku ndị ọkachamara sayensị. Turkey mbụ sayensị center na ụkpụrụ dị elu nke Konya Science Center, 2018 na ụwa na ka ọtụtụ narị puku ndị ọbịa si dị iche iche obodo Turkey, nakwa dị ka ihe ọzọ dị mkpa na nkà mmụta sayensị mere kwadoro site Google. Konya Metropolitan Municipality Mayor Ugur Ibrahim Altay, Turkey si TUBITAK akwado, nke bụ ihe mbụ sayensị center na Konya Science Center Planetarium, ...
7. Egwuregwu Konya Science emepe ibo ụzọ ya maka ihe ọmụmụ sayensị 05 / 10 / 2019 xnumx'inci Science Ememme na Konya, Turkey mbụ sayensị center malitere na TUBITAK-aided Konya Science Center. KONYA, AK CKỌ NKW SCKP SCR IN NA PASTỌ NA TODAY Konya Metropolitan Mayor Uğur İbrahim Altay, na-ekwu okwu na mmeghe nke ememe ahụ na itinye aka dị ukwuu, 7 nke Konya. narị afọ, sayensị nke ọdịbendị, nka na omenaala ya na ndị mmadụ chetara na etiti sayensị. Onye isi ala Altay kwuru na Konya ka bụ ebe etiti sayensị yana ụlọ ọrụ ya, mahadum ya na ọrụ ugbo. 12 Anyị nwere mpaghara ime ụlọ 100 puku square mita dị puku puku. Anyị na-ahazi ihe omume dị iche iche na nnukwu ụlọ ihe ngosi 26 anyị. N'ezie, ya na Ememe Sayensi…
Umu mmadu ndi mmadu gara elere anya na umu mmadu 14 / 01 / 2015 Erciyes Ski Center na 60 puku ndị mmadụ gara Kayseri Erciyes Metropolitan Municipality nke ulo oru mbo ke oyi njem nke ghọọ a n'ụwa nile center okodomo izu ụka mwubata nke ọbịa. Edere ọnụ ọgụgụ nke ndị nọ na Saturday na Sunday na Erciyes. Mmadụ 60 puku mmadụ bịarutere n'ọdụ ụgbọ elu. Ụlọ ọrụ na-eme njem nlegharị anya nke Snowci na Center Obodo Ukwu malitere ịmị mkpụrụ. Ọtụtụ iri puku mmadụ si Kayseri na Kayseri nọrọ izu ụka na Erciyes. n'ibu osisi izu ụka Erciyes Inc. Dị ka data nke obi ụtọ nke ski na skai mkpọda nke dị iche iche degrees isi ike iji banyere 17 puku ndị mmadụ. Egwu na sledding kız
Mmadụ 208 gara leta Tahtalı Mountain na Olympos Cable Car 16 / 10 / 2014 Mmadụ 208 gara eleta Olympos Teleferik na Tahtalı Mountain: Igwe 2365 dị elu Tahtalı Mountain na district Kemer nke Antalya jupụtara na ndị ọbịa. Na ọnwa 9 nke mbụ n'afọ, 208 puku mmadụ gara Olympos Cable Car na Tahtalı Mountain. Olympos Cable Car, nke e guzobere na 2007 na Tahtalı Mountain, nwere ohere ịga site na oké osimiri ruo na mbara igwe na ndị njem nleta na mpaghara mba ọzọ na-abanye n'ógbè ahụ. Olympos Teleferik General Manager Haydar Gümrükçü, 9 na ọnwa mbụ nke afọ a, mmadụ 208 puku mmadụ gara na mpaghara, o kwuru. Haydar Gümrükçü kwuru na ha chọrọ iru 230 puku mmadụ na njedebe nke afọ a.
Nnukwu ọrụ a gwọrọ enweghị ọrụ, 150 riri otu puku mmadụ 30 / 12 / 2014 Nnukwu ọrụ a gwọrọ n'enweghị ọrụ, 150 riri otu puku mmadụ: mmadụ 40 puku mmadụ na-arụ ọrụ na otu narị ihe ngo gụnyere Ọdụ atọ na Yavuz Sultan Selim Bridge. Ọtụtụ ijeri ọrụ ndị na-adọrọ mmasị na nnukwu ego ha na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ abụrụla ọnụ ụzọ nke olileanya maka ọtụtụ puku mmadụ, site na ndị ọrụ na ndị nna ukwu, ndị na-ede akwụkwọ na ndị injinia. Naanị 3. Mmadụ 30 puku mmadụ na-etinye oge n'oge ọrụ ụgbọ elu. Ọnụ ọgụgụ mmadụ niile bụ 40 puku. Otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma, 150, na-eri otu puku mmadụ mgbe a na-agbakọ ya na ezinụlọ ha. Site na İzmir ruo X XUMUM nke puku mmadụ iri na otu nke weliri Yavuz Sultan Selim Bridge, nke atọ nke Bosphorus bin
Ngwa IMBB 'Ihe ngosi Njem nlegharị anya' iji mee ka njem njem dịkwuo mma
Ndị njem nlegharị anya na Ukraine Admire Kayseri
Konya Science Center Na-akwado 1 Million 225 Thousand Science Curiosities
7. Egwuregwu Konya Science emepe ibo ụzọ ya maka ihe ọmụmụ sayensị
Mmadụ 208 gara leta Tahtalı Mountain na Olympos Cable Car
Nnukwu ọrụ a gwọrọ enweghị ọrụ, 150 riri otu puku mmadụ
3. Mmadụ 150 puku mmadụ ga-akwaga n'ọdụ ụgbọelu
Turkey si Marmaray 150 Annual Dream mbụ bụ Ray Ngidi
Ijeri 6 nke 376 Ndi 288 Ndi mmadu 2 nde gafere na njedebe Kocaeli
Ejere Ski Resort na Erciyes gara 400 site na ndị nọ na Semester